ကွကျသှနျဖွူမီးဖုတျက သငျ့ကနျြးမာရေးအတှကျ ဘာ့ကွောငျ့ကောငျးတာလဲ? - Lifestyle Myanmar
ကွကျသှနျဖွူမီးဖုတျက သငျ့ကနျြးမာရေးအတှကျ ဘာ့ကွောငျ့ကောငျးတာလဲ?
ကွကျသှနျဖွူက ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအစာတဈခုပါ။ ကွကျသှနျဖွူဟာ ကိုယျခံစှမျးအား ကောငျးစဖေို့အတှကျ သဘာဝဆေးတဈမြိုးဖွဈပွီး ရှေးယခငျထဲက ဆေးဝါးအဖွဈ ကမ်ဘာပျေါမှာ ကယျြပွနျ့စှာ အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။
ကွကျသှနျဖွူက ဘာ့ကွောငျ့ အသုံးဝငျတာလဲ?
ကွကျသှနျဖွူမှာ အစှမျးထကျ anti-inflammatory နဲ့ ကိုယျခံစှမျးအားကို အားကောငျးစတေဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှုတှရှေိပါတယျ။ ၎င်းငျးမှာ အားကောငျးတဲ့ အငျတီအောကျဆီဒငျ့တနျဖိုးတဈခုရှိပွီး သှေးစငျကွယျခွငျး၊ အိုမငျးမှုကို နှေးကှေးစခွေငျးနှငျ့ ခန်ဓာကိုယျဆဲလျတှကေို ကာကှယျပေးပါတယျ။
ကွကျသှနျဖွူရဲ့ ဒီဂုဏျသတ်တိတှကေို မပကျြပွယျဘဲ တိုးပှားစခေငျြရငျ မီးဖုတျပွီး စားနိုငျပါတယျ။ ၆မိနဈလောကျ မီးဖုတျပေးယုံနဲ့ ၎င်းငျးရဲ့ အကြိုးအာနိသငျကို တိုးပှားစယေုံသာမက ခါးသကျသကျအရသာကိုလညျး ဖယျရှားပေးပါတယျ။
ကငျဆာကို တားဆီးဖို့ ကူညီပေးပါတယျ
ကွကျသှနျဖွူဟာ ကငျဆာအန်တရာယျကိုတောငျ လြော့နညျးစကွေောငျး သကျသပွေခဲ့တာတှေ ရှိပါတယျ။
ကွကျသှနျဖွူမီးဖုတျ သို့မီးကငျပွီး ပုံမှနျစားသုံးပေးရငျ သှေးရဲ့ anticarcinogenic ဂုဏျသတ်တိတှကေို တိုးပှားစနေိုငျပွီး အူလမျးကွောငျး ကငျဆာအန်တရာယျကို လြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။ ကွကျသှနျဖွူကို မီးမဖုတျခငျမှာ ကွကျသှနျဖွူအမှာကို နညျးနညျးထုလိုကျပွီးမှ ၁၀မိနဈလောကျ မီးကငျပေးပါ။ ဒီနညျးလမျးက အပူလှမျးမိုးမှုရဲ့ ဆိုးကြိုးသကျရောကျမှုကို သိသာစှာ လြော့ခပြေးပွီး ကွကျသှနျဖွူရဲ့ ဘကျတီးရီးယားဂုဏျသတ်တိတှဖွေဈတဲ့ allicinကို ထုတျလှတျပေးပါလိမျ့မယျ။
သသေခြောခြာပွငျဆငျပွီး စားမယျဆိုရငျ ကွကျသှနျဖွူဖုတျထားတဲ့ အရသာက မယုံနိုငျလောကျအောငျ အရသာကောငျးပါတယျ။ ထိပျဖွတျပွီး အခှံမခှာထားတဲ့ ကွကျသှနျဖွူ ၆မှာ၊ သံလှငျဆီ၊ ဆားနှငျ့ ပေါငျမုနျ့မီးကငျလိုပါတယျ။ ပွုလုပျနညျးကတော့ ကွကျသှနျဖွူပျေါမှာ သံလှငျဆီအစကျအနညျးငယျ ဖွနျးပါ။ ဆားထညျ့ပွီး ပြော့သှားတဲ့အထိ မိနဈ ၂၀- ၃၀ကွာ ဖုတျပေးပါ။ ပေါငျမုနျ့မီးကငျနဲ့ တှဲပွီး စားနိုငျပါတယျ။
ကြက်သွန်ဖြူမီးဖုတ်က သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာ့ကြောင့်ကောင်းတာလဲ?
ကြက်သွန်ဖြူက ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုပါ။ ကြက်သွန်ဖြူဟာ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းစေဖို့အတွက် သဘာဝဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရှေးယခင်ထဲက ဆေးဝါးအဖြစ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူက ဘာ့ကြောင့် အသုံးဝင်တာလဲ?
ကြက်သွန်ဖြူမှာ အစွမ်းထက် anti-inflammatory နဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို အားကောင်းစေတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်။ ၎င်းမှာ အားကောင်းတဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့်တန်ဖိုးတစ်ခုရှိပြီး သွေးစင်ကြယ်ခြင်း၊ အိုမင်းမှုကို နှေးကွေးစေခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်တွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ ဒီဂုဏ်သတ္တိတွေကို မပျက်ပြယ်ဘဲ တိုးပွားစေချင်ရင် မီးဖုတ်ပြီး စားနိုင်ပါတယ်။ ၆မိနစ်လောက် မီးဖုတ်ပေးယုံနဲ့ ၎င်းရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကို တိုးပွားစေယုံသာမက ခါးသက်သက်အရသာကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
ကင်ဆာကို တားဆီးဖို့ ကူညီပေးပါတယ်
ကြက်သွန်ဖြူဟာ ကင်ဆာအန္တရာယ်ကိုတောင် လျော့နည်းစေကြောင်း သက်သေပြခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူမီးဖုတ် သို့မီးကင်ပြီး ပုံမှန်စားသုံးပေးရင် သွေးရဲ့ anticarcinogenic ဂုဏ်သတ္တိတွေကို တိုးပွားစေနိုင်ပြီး အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူကို မီးမဖုတ်ခင်မှာ ကြက်သွန်ဖြူအမွှာကို နည်းနည်းထုလိုက်ပြီးမှ ၁၀မိနစ်လောက် မီးကင်ပေးပါ။ ဒီနည်းလမ်းက အပူလွှမ်းမိုးမှုရဲ့ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကို သိသာစွာ လျော့ချပေးပြီး ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ ဘက်တီးရီးယားဂုဏ်သတ္တိတွေဖြစ်တဲ့ allicinကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သေသေချာချာပြင်ဆင်ပြီး စားမယ်ဆိုရင် ကြက်သွန်ဖြူဖုတ်ထားတဲ့ အရသာက မယုံနိုင်လောက်အောင် အရသာကောင်းပါတယ်။ ထိပ်ဖြတ်ပြီး အခွံမခွာထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ၆မွှာ၊ သံလွင်ဆီ၊ ဆားနှင့် ပေါင်မုန့်မီးကင်လိုပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းကတော့ ကြက်သွန်ဖြူပေါ်မှာ သံလွင်ဆီအစက်အနည်းငယ် ဖြန်းပါ။ ဆားထည့်ပြီး ပျော့သွားတဲ့အထိ မိနစ် ၂၀- ၃၀ကြာ ဖုတ်ပေးပါ။ ပေါင်မုန့်မီးကင်နဲ့ တွဲပြီး စားနိုင်ပါတယ်။